KARIERAN’ANJOZOROBE : Maty voatifitra ny Zandary mpiambina ny zanaky ny Filoha
Nandriaka indray ny rà tany amin’ny karieran’Ankaraoka, ao anatin’ny Kaominina Ambatomanohina-Anjozorobe. 9 janvier 2017
Ny sabotsy hariva lasa teo, Zandary iray kilasy faharoa, miasa eo anivon’ny prezidansa no sady mpiambina ny zanaka lahin’ny Filoham-pirenena no maty lavon’ny bala tany an-toerana.
Nitohy indray mantsy ny disadisa misy eo amin’ity toeram-pitandrahana vato ity raha somary efa nangina izany tato ho ato.
“Ny alakamisy teo no tonga taty aminay ny vadintany izay nilaza ny hanala ireo mpitrandraka vato ao amin’ilay kariera. Rehefa nohamarinina ny taratasy rehetra avy amin’ny Fitsarana ahafahana manatanteraka izany dia ny sabotsy teo no niara-nidina tany Anjozorobe izahay”, hoy ny fanazavana voaray. Ity Zandary maty ity niaraka tamina miaramila maromaro no voalaza fa mpiambina io toerana io, ka hanala ireto farany ao no anisany anton-diany.
Araka ny vaovao voaray, na dia nampiseho ireo taratasy mazava aza ireo mpitrandraka dia niziriziry tsy nety niala hatramin’ny farany ry zalahy fa nilaza ho mpanatanteraka baiko fotsiny ihany. Rehefa nihenjan-droa
ny tady dia raikitra amin’izay ny fifampitifirana.
“Tampoka teo tonga dia nisy nitifitra tsy fanta-piaviana, ka voatery nitifitra niaro tena izahay”, araka ny vaovao voaray avy amin’ny Zandarimariam-pirenena. Raikitra, araka izany, ny fifampitifirana ka voa teo amin’ny takibany ny iray tamin’ireo Zandary mpiambina. Naratra mafy ity farany, noentina avy hatrany tany amin’ny hopitaly kanefa noho ny faverezan-dra be loatra dia tapitra teny an-dalana ny ainy.
Mbola mifamahofaho tanteraka ity trangan-javatra ity hatramin’izao. Andrasana izay mety ho tohin’ny raharaha.